မြမြ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအတွက် သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးတွင် ဘယ်သူတွေက ရွေးချယ်ခံရမလဲ...😱😱 - Zeekwat Hot News
September 9, 2019039
မြမြ ရုပ်​ရှင်​ ဇာတ်​ကားအတွက်​ သရုပ်​​ဆောင်​သစ်​​ရွေးချယ်​ပွဲကြီးကို စက်​တင်​ဘာ (၈)ရက်​​နေ့ တနင်္ဂ​နွေ​နေ့ မနက်​(၁၀)နာရီ အချိန်​ခန့်​က ကန်​​တော်​ကြီး​မျှော်​စင်​ကျွန်းတွင်​ ကျင်းပပြုလုပ်​ခဲ့ပါတယ်​။ ထိုပွဲတွင်​ ဒိုင်​များအဖြစ်​ ဒါရိုက်​တာ ​မောင်​သီ ၊ သရုပ်​​ဆောင်​ဦးစိုင်း​အောင်​တင့်​၊ စူပါသတင်းစုံအယ်​ဒီတာချူ ပ်​ကိုဦး​ဆွေ နှင့်​ အခမ်းနားမှူးအဖြစ်​တာဝန်​ယူ​ဆောင်​ရွက်​​ပေး​သော သရုပ်​​ဆောင်​ ​ဒေါင်း​ဝေ ၊ မနီနီလှိုင်​ နှင့်​ အစရှိသည့်​အနုပညာရှင်​များစွာ နယ်​ပယ်​အသီးသီးမှ အနုပညာရှင်​များမှ ပါဝင်​ကူညီ​ပေးခဲ့ကြပါတယ်​။
Photo ; Crd :https://www.facebook.com/mysteryofmyamya/
Photo Crd :https://www.facebook.com/mysteryofmyamya/
မြမြ ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားအတွက်​ မုဒိန်းသမား ၃ဦးကို ​ရွေးချယ်​ခဲ့ပါသည်​။ ထိုသူများမှာ – နံပါတ်​ (၇)လင်း​နေ ၊ နံပါတ်​ (၈၀) ကိုစိုင်း ၊ နံပါတ်​ (၁၂၈) မျိုးလှုိင်​ဝင်း တို့ ဖြစ်​ပါတယ်​။
ထိုသူများကို ဒိုင်​များက ဘာ​ကြောင့်​​ရွေးခဲ့တာလဲ ? ​ရွေးချယ်​လိုက်​တဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​ ၃ဦးက​ရော ဘယ်​​လောက်​ ​တော်​လဲဆိုတာကို ပရိတ်​သတ်​ကြီးက သိချင်​တယ်​ဆိုရင်​​တော့ ဒီရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားထွက်​လာတဲ့အထိ ​စောင့်​​မျှော်​ရင်​ခုန်​​ပေးကျပါလို့ ​ပြောချင်​ပါတယ်​​နော်​။ ဒါရိုက်​တာ ညိုမင်းလွင်​ ရိုက်​ကူးမယ့်​မြမြဆိုတဲ့ရုပ်​ရှင်​ ဇာတ်​ကားမှာ ညိုမင်းလွင်​က သူရဲ့ လျှုိဝှက်​တဲ့သိုသပ်​တဲ့ရိုက်​ချက်​​တွေ ခံမှန်းလို့မရလွန်းတဲ့ရိုက်​ချက်​​တွေနဲ့အတူ ၊ နိုင်​ငံ​ကျော်​ မင်းသမီး “သင်​ဇာဝင့်​​ကျော်​” က​ရော သူမရဲ့ ပြီပြင်​လွန်းတဲ့ သရုပ်​​ဆောင်​မှု​တွေကို ဘယ်​လိုမြင်​​တွေရမလဲဆိုတာ သိချင်​ရင်​​တော့ ဒီရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကားထွက်​လာတဲ့အထိ​စောင့်​​မျှော်​​ပေးကျပါ​နော်​။
မွမွ ရုပျရှငျ ဇာတျကားအတှကျ သရုပျဆောငျသဈရှေးခယျြပှဲကွီးကို စကျတငျဘာ (၈)ရကျနေ့ တနင်ျဂနှနေေ့ မနကျ(၁၀)နာရီ အခြိနျခနျ့က ကနျတျောကွီးမြှျောစငျကြှနျးတှငျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့ပါတယျ။ ထိုပှဲတှငျ ဒိုငျမြားအဖွဈ ဒါရိုကျတာ မောငျသီ ၊ သရုပျဆောငျဦးစိုငျးအောငျတငျ့၊ စူပါသတငျးစုံအယျဒီတာခြူ ပျကိုဦးဆှေ နှငျ့ အခမျးနားမှူးအဖွဈတာဝနျယူဆောငျရှကျပေးသော သရုပျဆောငျ ဒေါငျးဝေ ၊ မနီနီလှိုငျ နှငျ့ အစရှိသညျ့အနုပညာရှငျမြားစှာ နယျပယျအသီးသီးမှ အနုပညာရှငျမြားမှ ပါဝငျကူညီပေးခဲ့ကွပါတယျ။
မွမွ ရုပျရှငျဇာတျကားအတှကျ မုဒိနျးသမား ၃ဦးကို ရှေးခယျြခဲ့ပါသညျ။ ထိုသူမြားမှာ – နံပါတျ (၇)လငျးနေ ၊ နံပါတျ (၈၀) ကိုစိုငျး ၊ နံပါတျ (၁၂၈) မြိုးလှုိငျဝငျး တို့ဖွဈပါတယျ။
ထိုသူမြားကို ဒိုငျမြားက ဘာကွောငျ့ရှေးခဲ့တာလဲ ? ရှေးခယျြလိုကျတဲ့ သရုပျဆောငျ ၃ဦးကရော ဘယျလောကျ တျောလဲဆိုတာကို ပရိတျသတျကွီးက သိခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီရုပျရှငျဇာတျကားထှကျလာတဲ့အထိ စောငျ့မြှျောရငျခုနျပေးကပြါလို့ ပွောခငျြပါတယျနျော။ ဒါရိုကျတာ ညိုမငျးလှငျ ရိုကျကူးမယျ့မွမွဆိုတဲ့ရုပျရှငျ ဇာတျကားမှာ ညိုမငျးလှငျက သူရဲ့ လြှုိဝှကျတဲ့သိုသပျတဲ့ရိုကျခကျြတှေ ခံမှနျးလို့မရလှနျးတဲ့ရိုကျခကျြတှနေဲ့အတူ ၊ နိုငျငံကြျော မငျးသမီး “သငျဇာဝငျ့ကြျော” ကရော သူမရဲ့ ပွီပွငျလှနျးတဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကေို ဘယျလိုမွငျတှရေမလဲဆိုတာ သိခငျြရငျတော့ ဒီရုပျရှငျဇာတျကားထှကျလာတဲ့အထိစောငျ့မြှျောပေးကပြါနျော။